‘Sorona amin’ny afo’: Ny fandikàna voalohany ny teny hoe «Fandripahana Faobe» amin’ny teny Khmer ao Kambôdza · Global Voices teny Malagasy
Fomba fiteny Khmer voalohany nentina nandikàna ny Fandripahana Faobe.
Voadika ny 09 Oktobra 2019 8:03 GMT
Vehivavy iray mitazona dika mitovy amin'ilay bokin'i Hédi Fried nadikan'i Sovicheth Meta tamin'ny teny Khmer, mitondra ny lohateny hoe “Ireo fanontaniana apetraka amiko momba ny Fandripahana Faobe”, tao Phnom Penh ny 19 Jolay 2019. Sary nalain'i Matt Surrusco.
Avy ao amin'ny VOD News, vohikala tsy miankina iray vaovao ao Kambôdza, io lahatsoratra nosoratan'i Matt Surrusco io, ary averina avoaka indray ato amin'ny Global Voices anatin'ny fifanaraham-pizaràna votoaty. Voatonona anatin'io lahatsoratra io ny Khmer Rouge, izay nanjaka tao Kambôdza nanomboka ny taona 1975 ka hatramin'ny taona 1979. Fara-fahakeliny, olona 1,7 tapitrisa no maty tamin'ny fotoana nitondrany.
Mpandika teny Kambôdziana iray no namorona fiteny vaovao amin'ny teny Khmer ho an'ilay teny hoe “Fandripahana Faobe” entina ampiasaina amin'ireo famoahana vaovao ao amin'ny Documentation Center of Cambodia (DC-Cam) na ny Foibem-pikarohana Ao Kambôdza, isan'izany ny fandikàny amin'ny teny Khmer an'ilay boky rakitra iray nataon'olona tafavoaka velona tamin'ilay Fandripahana Faobe ka navoaka tao Phnom Penh ny 19 Jolay 2019.
Mpandika teny sady mpikaroka vao 21 taona monja ao amin'ny DC-Cam i Sovicheth Meta, izay manasokajy ireo antontan-taratasy mirakitra ny tantara nanomboka tamin'ny vanimpotoan'ny vonomoka nataon'ny Khmer Rouge ny taona 1975 ka hatramin'ny 1979. Nambarany fa nadikany tamin'ny teny Khmer ho “bochea phleung” midika hoe “fanaovana sorona amin'ny afo”, ny “Fandripahana Faobe,” izay milaza ny vono olona faobe sy ny fanaovana vonomoka ireo Jiosy maherin'ny 6 tapitrisa nataon'ny fitondràna Alemàna Nazi ny taona 1940.
Araka ny voalazan'i Meta dia:
Ny [fomba fiteny hoe] Fandripahana Faobe ampiasaina anatin'ilay boky ary koa eo amin'ny fonon'ilay boky no voadika voalohany indrindra tamin'ny teny Khmer. Ary izao koa no fotoana voalohany nandikàna ity boky manokana mikasika ny Fandripahana Faobe ity ho amin'ny teny Khmer.
Boky rakitra nataon'i Hédi Fried tamin'ny taona 2017 ilay boky “Ireo Fanontaniana Apetraka Tamiko Momba ny Fandripahana Faobe”, olona iray tafavoaka velona tao amin'ny toby fitanana Auschwitz sy Bergen-Belsen izay niorina tao Soeda taorian'ny Ady Lehibe Faharoa.
Nadikan'i Meta tamin'ny teny Khmer ireo fanontaniana sy valiny 44 avy amin'ny bokin'i Fried, niainga avy amin'ny dikateny anglisy nataon'i Alice E. Olsson. Indro ny sasany amin'ireo fanontaniana ireo: “Ahoana no nahafahanà vahoaka iray manontolo nanohana an'i Hitler?” “Nanao ahoana ny fiainana tao amin'ny toby?; ary “Nanonofy ve ianao tamin'ny alina?”
Na dia nisy dikateny Khmer hafa aza momba ny Fandripahana Faobe, isan'izany ny dikateny Khmer nataon'ny DC-Cam an'ilay “Diarinà Tovovavy Kely Iray” nosoratan'i Anne Frank, “amin'izao fotoana izao dia tsy misy teny ilazàna ny “Fandripahana Faobe” ao amin'ny rakibolana Khmer”, hoy i Meta tamin'i VOD.
Any amin'ireo boky hafa amin'ny teny Khmer, mifototra amin'ny feo Anglisy ireo mpandika teny rehefa nanoratra izany tamin'ny teny Khmer; na koa namaritra ara-bakiteny ilay fomba fiteny tamin'ny famonoana ireo Jiosy nandritry ny Ady Lehibe Faharoa nandritra ny fitondran'ny Nazia, hoy i Meta.
Tsy teny Khmer vao noforonina io fomba fiteny ampiasainy io, fa dikateny Khmer vaovao mifototra amin'ny fakanteny grika an'ilay teny ihany, hoy izy.
Nilaza i Jean-Michel Filippi, Mpampianatra haiteny Khmer ao amin'ny Anjerimanontolon'ny Mpanjaka ao Phnom Penh, fa araka ny fahalalàny, ankoatra ny teny Khmer ho an'ny “vonomoka” dia io teny ampiasain'i Meta io no dikateny voalohany ary teny tokana nilazàna ny “Fandripahana Faobe,” na dia hitany ho tsy dia mifanaraka loatra aza.
Nilaza i Filippi fa “mandika tsara ny hevitry ny Fandripahana Faobe tany am-boalohany” ilay fomba fiteny— “fanatitra iray nodorana tanteraka ambonin'ny alitara”— saingy nampanontany tena azy ihany ny fiankinan'ilay mpandika teny tamin'ny fiavian-teny Grika.
Ny dikan'ny “Fandripahana Faobe” manaraka ny toetrandro dia mifanitsy amin'ny “Shoah”—teny Hebreo handikana ny “loza” — ilazàna ny vonomoka nataon'ny Nazia an'ireo vahoaka Jiosy izay efa nankalazaina be hany ka “saika tsy hisy olona hiverin-dalàna hamerina ny dikany ho fanatitra amin'ny afo tany am-boalohany intsony,’” hoy i Filippi.
Raha lazaina amin'ny fomba hafa, tsy miankina amin'ny fiaviany ny dika mahazatra fanome io teny io ary ny ‘Fandripahana Faobe’ dia lasa anaran-tsamirery.
Nanome sosokevitra izy ny hampiasàna ny “Fandripahana Faobe” na ny “Shoah” amin'ny teny Khmer “fa tsy arahana ezaka handika izany lavitra kokoa” ankoatra ny fanomezana fanazavàna na famaritana.
Ho an'i Chhang Youk, tale mpanatanteraka ao amin'ny DC-Cam, mitombona ilay fomba fiteny vaovao ary nitaratra ny “fifandraisan'ny Fannaovana Sorona amin'ny Afo sy ny vonomoka tao Kambodza”.
Nolazain’ Youk tamin'i VOD ny fanantenany fa hanampy amin'ny famongorana ny fanavakavahana eo amin'ny vahoaka ny dikateny Khmer an'ilay bokin'i Fried “mba hahafahantsika misoroka ny fiverimberenan'ny heloka bevava tahaka izany.”
“Manan-danja ny teny ary mitaky fahatakarana manokana rehefa mampiasa azy ireo ianao,” hoy izy.
Ny bokim-pikarohana “Vonomoka Fampitahàna sy Habibiana Natao taminà Vahoaka Marobe tanatin'ny Ady Lehibe” havoakan'ny DC-Cam tsy ho ela dia hampiasa ilay fomba fiteny vaovao “bochea phleung,” miaraka amin'ny fanazavàna ny dikany anatinà toko iray momba ny Fandripahana Faobe, hoy i So Farina, tale Mpanantanteraka Mpanampy ao amin'ny DC-Cam.
Nanaiky ny lahatsoratra anatin'ilay boky ny minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena ary mihevitra ny hampiasa ampahany anatin'izany any amin'ny sekoly ambaratonga faharoa manomboka amin'ity taona ity na amin'ny taona manaraka, hoy i Farina.
Misy dika mitovy amin'ilay boky miisa telonjato nomena maimaimpoana mpianatra am-polony teny amin'ny anjerimanontolo sy olona hafa ny 19 Jolay 2019, io boky io izay asasoratra voalohany nataon'i Meta taorian'ny herintaona niasany sy nanaovany asa an-tsitrapo tao amin'ny DC-Cam.
Nanambara ny fanantenany ilay mpandika teny fa afaka ny hamaky ilay boky ireo Kambodiana rehetra, indrindra ny tanora, ary hianatra momba ny tantara mitovitovy misy eo amin'i Eoropa sy Kambodza, mba hisorohana ny fanaovana vonomoka foko amin'ny ho avy :